I-TRF kwiTV yeTV - Isiseko soMvuzo - Uthando, isini kunye ne-Intanethi
Ikhaya TRF kwiThelevishini
Ukusukela phakathi ku-2016 i-CEO ye-The Reward Foundation, uMary Sharpe, ebesenza ukubonakala kumabonwakude. Nazi ezinye zazo.
Isithoba kwi-BBC Scotland
I-Reward Foundation yayonwabile ngethuba lokuxoxa ngomsebenzi wayo xa uMary Sharpe wamenyelwa kwi-Nine kwi-BBC Scotland TV. Into ngoLwesine 5th NgoDisemba i-2019 yayimalunga nokunyuka kokungqengqa ngokwesini kunye nekhonkco yayo kwimifanekiso engamanyala. Umcimbi malunga nomthetho wokuqinisekiswa kwe-Age waphakanyiswa kwaye uMary wakwazi ukulungisa iinkcukacha ezingachanekanga ezijikeleza kwi-BBC nakwimithombo yeendaba ngokubanzi. Ukuphunyezwa komthetho wokuqinisekiswa kobudala obuqulathwe kwiCandelo 3 yomthetho wezoqoqosho lwedijithali 2017 bekufanele ukuba wenziwe kulo nyaka, kodwa ubuhlehlisiwe, awushiywanga. Ngapha koko, umphathiswa waseburhulumenteni wase-UK obandakanyekayo uqinisekisile ngokubhaliweyo ukuba iyakudityaniswa ne-Online Harms Bill, ukwenzela ukuba ukufikelela kwiitayile ezingamanyala ngewebhusayithi zentengiso kunye namaqonga eendaba ezentlalo kuya kuncitshiswa kubantu abaphezulu kwe18.
Icandelo laqala ngentatheli yeThoba uFiona Stalker ebuza lo mbuzo Ngaba ubundlobongela obungafunekiyo ngexesha lokwabelana ngesondo “yinto eqhelekileyo”? Kuza emva kwenani lamatyala aphakamileyo olwaphulo-mthetho athe weva ukukhuselwa 'kwesini esibi sahamba gwenxa'. Uphando lwamva nje lukwabonisa inani elinyukayo labasetyhini abasebatsha abahlangabezana nezenzo zobundlobongela ezingafunekiyo. Ngaba kulula kakhulu ukugxeka iphonografi?
Umsasazi we studio URebecca Curran kwaye UMartin Geissler emva koko wadlan 'indlebe noMary Sharpe, uSihlalo weThe Reward Foundation kunye nentatheli uJenny Constable, ukuphonononga lo mbandela unzima. Ividiyo ikwiinxalenye ezimbini.
Uluntu lwaseScotland Gaelic lubone inkqubo yalo yokuqala inikezelwe kwiimpembelelo zephonografi nangomoya wayo njengenxalenye yechungechunge An Sgrudaire (Umphandi) oboniswe kwi-21 ngo-Matshi 2019.
I-Ruairidh Alastair ibuyele eminye imibuzo malunga nemicimbi echaphazela ubomi babantu abatsha, kwaye ufuna iimpendulo ngokuthetha kunye neengcali, ukuphulaphula iipanellist zethu kunye nokuphanda usebenzisa i-fowuni yakhe kunye nama-wits.
Kulesi siqendu uphanda ukuba likhoboka lemifanekiso engamanyala kwaye yeyiphi ingozi enokubangela, ngexesha apho ukufikelela kwi-porn kungazange kube lula ngesantya esiphezulu sonxibelelwano lwe-Intanethi kunye neefowuni eziphathwayo. Isicatshulwa esibonisiweyo yingxoxo kaRuairidh kunye noMary Sharpe weSiseko soMvuzo.
UMary Sharpe ubuyele kumabonwakude Nolan Live Kwi-BBC yaseMantla eIreland ngomhla we-7th ka-Matshi 2018. Waxoxa ngempembelelo yephonografi kwimpilo yengqondo neyasemzimbeni yabantwana kunye nomninimzi uStephen Nolan kunye nomzabalazo we-porn kunye nomlutha we-porn ophulukayo.
U-Mary Sharpe uvele kwi-Nolan Live kwi-BBC yase-Northern Ireland ngomhla we-19 ku-Okthobha ka-2016. Waxoxa malunga nokufundisa abantwana abancinci njenge-10 kunye nomninimzi uStephen Nolan kunye nomlobi wephephandaba waseLondon uCarol Malone. Ividiyo inamacandelo amabini, inye malunga nemizuzu engama-6 imizuzwana engama-40.